အသီးကုသမှု | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan ,OEM,ODM-cropprotectionmachinery.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan အသီးကုသမှု ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
၏ကြီးထွား parameters တွေကိုအပေါ်မီးခိုးကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု‘Heinz-1370’ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်အခြေအနေများအောက်တွင်ခရမ်းချဉ်သီး.မီးခိုးထုတ်ယူ[500 mL(1 mL=0 င်.0338ﬂအောင်)]အနီရောင်မြက်ကိုမီးရှို့ရာမှဖြစ်ခဲ့သည်ကိုပြင်ဆင်ﬁမှတဆင့် lteredﬁlter စက္ကူနှင့်စတော့ရှယ်ယာဖြေရှင်းချက်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်.မီးခိုး-ရေပြင်းအားသည်မြေဆီလွှာရှဲရှဲစိုအဘို့ကိုထိပုတ်ပါရေ 500 သို့မဟုတ် 2000 mL နှင့်အတူစတော့ရှယ်ယာဖြေရှင်းချက် 1 mL diluting ကပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်.ကုသမှုအိုးမီးခိုးနှင့်နှစ်ကြိမ်အပတ်စဉ်ရေလောင်းခဲ့ကြ-ရေသို့မဟုတ် butenolide ဖြေရှင်းချက်နဲ့တစ်ချိန်ကရေနှင့်အတူသူတို့ရောက်ရှိသည်အထိﬁeld စွမ်းရည်.ထိန်းချုပ်မှုအိုးသုံးကြိမ်အပတ်စဉ်ရေနှင့်ရေလောင်းခဲ့ကြ(ဎ=15plants) (Manoj, G.Kulkarni，Glendon: D.Ascough,ဂျိုဟန်ဗန် Staden 2008)
ရလဒ်ဖေါ်ပြခြင်း,အသီးကိုအပင်ကိုသောက်သည်ရေ 500 ကြိမ်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ပြည့်စုံသည်,နှင့်အသီး၏ရာခိုင်နှုန်း 2000 ကြိမ်သောက်သည်ရေအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် butenolide ဖြေရှင်းချက်ထက်သိသိသာသာမြင့်မား.(Manoj, G.Kulkarni，Glendon: D.Ascough,ဂျိုဟန်ဗန် Staden 2008)
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cropprotectionmachinery.com/my/fruit-treatment.html
အသီးကုသမှု ထုတ်လုပ်သူနှင့် အသီးကုသမှု ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ ,OEM,ODM-ကျော် 22,551 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ cropprotectionmachinery.com